Uhuru Kenyatta oo qalinka ku duugay sharci muran dhaliyay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Uhuru Kenyatta oo qalinka ku duugay sharci muran dhaliyay
Uhuru Kenyatta oo qalinka ku duugay sharci muran dhaliyay
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa qalinka ku duugay sharci muran dhaliyay oo ku saabsan xaasaska badan ee la guursado.
Sharciga ayaa markii hore ogolaa in ninku uu hal xaas yeesho, balse dhaqammada bulshooyinka Kenya qaarkood ayaa oogolaa in raggu ay dumar kale yelan karaan.
Sharcigan isbadalka lagu samaynayo ayaa muran badan dhaliyay, waxaana taageeray ragga xildhibaannada ah oo u coddeeyay in raggu ay xaasas badan guursan karaan.
Dhaqan ahaan min waynta ayaa la rabaa in ogolaansho laga helo inta aan xaaskale lagu dhaqaaqin.
Bishii hore xildhibaannada dumarka ah ayaa baarlamaanka isaga dareeray ka dib markii xubnihii ragga ahaa ay u codeeyeen in la badalo sharcigii hore ee halka xaas ogolaa.
Waxay ku doodeen in go’aanka xaaskale lagu fasaxayo uu saamaynayo qoyska oo dhan, arrintaas oo ay ka mid tahay dhaqaalihii ay heli jirtay minwaynta.
Sharcigan waxaa sidoo kale ka soo horjeedsday madaxda diinta Kiristaanka, waxayna ku baaqeen in madaxweynuhu uusan sixiixin sharcigaas, iyaga oo sheegay in uu wiiqayo mabaadiida Kiristaanka ee ku aadan guurka iyo qoyska.
Sharciga guurka ayaa sannado badan laga soo doodayay hindiseyaashii horana guddiyada ayuu ka soo gudbiwaayay
Dooda iyo dib-u-eegist xeerka guurka ayaa socotay dhowr sanno. Dhowr jeer ayaa wax laga bedelay. Wuxuu xeerka cusub baabi’iyay guur dhaqameedka oo aan la diiwaangelin jirin islamarkaasna lagu kala tegi jiray iyada oo aan wax sharci ah la marin.
Laakiin wuxuu sharciga meesha ka saaray qorsheha lagu doonayay in lagu mabnooco sooryada. Labo iyo dhediguna waa inay ugu yaraan jiraan 18 sanno si ay isu guursadaan.
Xildhibaanadda ayaa diiday wax-ka-bedelka xeerka guurka ee guddiga oo dhigaya inay haweeneydu yeelato 30% hantida ninkeeda haddii odeygu geeriyoodo ama la furo. Xeerka cusub wuxuu hadda oggolaanayaa inay u sinaadaan dhaxalka hantida ee lamaanaha isqaba. Markii hore haweeneydu waxay ku qasbaneyd inay cadeyso wax ay ku biirisay hantida odeygeeda si ay dhaxalka uga yeelato.
Waxaa laga cabsi qabaa in xeerka cusub in uu rabshad ka dhex dhaliyo haweenka la isla qabo maadaama uusan sharaxaad iyo faahfaahin ka bixin doonin sida haweenka la isla qabo u wadaagayaan dhaxalka geerida odeygooda kadib amaba haddii midood la furo.
Previous article“Aniga Waxa Iga Yaabiyay Mawqifka Cirro, Hadaba MUUSE Kursi Uu Iskaga fadhiyo Wuu ku Fadhiyaaye, Isagu Muxuu Ku fadhiyaa?Cali Guray.
Next articleWiil Soomaali ah oo booliis ka ahaa Maraykanka oo dambi lagu helay